Duulimaadyada AlUla ee ka imanaya Dubai iyo Kuwait ee flynas hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada AlUla ee ka imanaya Dubai iyo Kuwait ee flynas hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kuweyt Kuweyt • News • Dadka • Waajib ah • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta
Flynas waxay bilawday duulimaadyadii caalamiga ahaa ee ugu horeeyay ee ay ku tagto AlUla.
Duulimaadka ugu horreeya ee AlUla waxa la daah furayaa Noofambar 19, 2021, iyada oo ka duuli doonta garoonka caalamiga ah ee Dubai inta lagu guda jiro xaflad gaar ah oo lagu xusayo taariikhda iyo hiddaha AlUla laguna horumarinayo adeegyada safarka hawada ee ku guulaysta abaalmarinta flynas.
Laga bilaabo Noofambar 19, 2021, waddooyinka caalamiga ah ee ugu horreeya ee gala AlUla waxay ka duuli doonaan Dubai iyo Kuwait.
Duulimaadka ugu horreeya ee Noofambar 19 waxa lagu beegay munaasabadda muusiga ee soo socota ee Maraya.
Faia Younan, soprano da'da yar iyo kooxdeeda heerka caalami waxay si toos ah uga dhigi doonaan Maraya isla taariikhda.
Flynas, oo ah shirkadda hawada qaada ee qaranka Sucuudiga, isla markaana hormuud ka ah duulimaadyada jaban ee Bariga Dhexe, ayaa ku dhawaaqday duulimaadyadeedii ugu dambeeyay oo ay ku jiraan duullimaadyadii ugu horreeyay ee caalami ah oo si toos ah u gala garoonka caalamiga ah ee AlUla.
Laga bilaabo 19th Noofambar 2021, waddooyinka caalamiga ah ee ugu horreeya ee AlUla ayaa ka kici doona Dubai iyo Kuwait. Waddooyinka gudaha ee lagu daray qayb ka mid ah ballaarinta waxaa ka mid ah Riyadh, Dammam iyo Jeddah. Ku dhawaaqista ayaa calaamad u ah markii ugu horeysay ee socdaalayaasha caalamiga ahi ay si toos ah ugu raaxaysan doonaan inay si toos ah u galaan mid ka mid ah goobaha taariikhiga ah ee ugu muhiimsan ee adduunka.
Duulimaadka ugu horreeya ee AlUla waxa la daah furayaa 19kath Noofambar 2021, laga bilaabo Garoonka Dubai International iyadoo lagu guda jiro xaflad gaar ah oo lagu xusayo taariikhda iyo hiddaha AlUla laguna horumarin doono flynasAdeegyada safarka hawada ee ku guulaysta abaalmarinta.
Isagoo ka faalloonaya horumarkan, CEO at flynas Mr. Bander Almohanna wuxuu yiri, "Waxaan ku faraxsanahay inaan AlUla ka dhigno mid si sahlan loo heli karo dhammaan dadka safarka ah ee gobolka, meel aad u gaar ah oo dhab ahaantii ah oo aan waligiis ku dhicin inay soo jiidato xitaa kuwa ugu khibradda badan safarka." Wuxuu intaas ku daray, "Waxaan ku kalsoonnahay in iskaashigayada aan la leenahay Guddiga Boqortooyada ee AlUla ay noqon doonto mid ka mid ah arrimo badan oo gacan ka geysanaya gaaritaanka yoolalka hamiga ah ee Hiigsiga 2030 ee Boqortooyada Sucuudi Carabiya si loo horumariyo mawqifka Boqortooyada ee ah goobta dalxiiska ee heer gobol iyo heer caalami."
Phillip Jones, Madaxa Maareynta Goobta iyo Sarkaalka Suuqgeynta ee Guddiga Boqortooyada ee AlUla (RCU) ayaa faallo ka bixiyay, “Kunnadii sano ee la soo dhaafay, AlUla waxay ahayd isgoysyada ilbaxnimooyinka. Dalkeena qadiimiga ah ayaa soo dhaweeyay socotada iyo degayaasha si ay u wadaagaan badeecadaha, fikradaha iyo dhisaan bulshooyinka. Maanta waxay AlUla u tahay guul weyn maadaama aan mar kale sii mari doono dariiqa socdaalka caalamiga ah. Soo-booqdayaasha waxay si toos ah ula geli karaan AlUla iyagoo wata duullimaadyo toos ah oo flynas ah oo ka imaanaya Dubia iyo Kuwait, waxaan eegeynaa inaan soo bandhigno booqdayaal badan oo taallo goobta loo socdo.
Duulimaadkii ugu horeeyay wuxuu dhacay 19th Noofambar waxa ay ku beegan tahay dhacdada muusiga ee soo socota ee Maraya. Faia Younan, soprano da'da yar iyo kooxdeeda heerka caalami waxay si toos ah uga dhigi doonaan Maraya isla taariikhda.
Jadwalka duullimaadyada caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee ka imanaya AlUla wuxuu noqon doonaa:
4 duulimaad todobaadle ah oo u dhexeeya AlUla & Riyadh
3 duulimaad todobaadle ah oo u dhexeeya AlUla & Dubai
3 duulimaad todobaadle ah oo u dhexeeya AlUla & Jeddah
3 duulimaad todobaadle ah oo u dhexeeya AlUla & Dammam
2 duulimaad todobaadle ah oo u dhexeeya AlUla & Kuwait
Horumarkan cusub, flynas waxa ay ku celinaysaa sida ay uga go'an tahay in ay bixiso dookhyo soo jiidasho leh oo loo baahan yahay halka ay ku wajahan tahay kuwaas oo buuxinaya filashada rakaabka. Intaa waxaa dheer, flynas waxay dooneysaa inay la socoto baahida sii kordheysa ee socdaalka iyo warshadaha dalxiiska ee la filayo inay markhaati ka noqoto dib u soo kabashada weyn ee wejiga soo socda iyadoo waddamadu ay sii wadaan ka soo kabashada dhibaatooyinka aan horay loo arag ee masiibada COVID-19.